बिजुली नीलो, तपाईको घरको लागि आधुनिक र साहसी रंग | बेजिया
इलेक्ट्रिक नीलो, तपाईंको घरको लागि आधुनिक र साहसी रङ
मारिया vazquez | 10/01/2022 20:00 | सजावट को चलन
यदि तपाइँ एक दिन को लागी एक रंग खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंको घरमा आधुनिक र साहसी नोट, अब यसको बारेमा सोच्नुहोस्, बिजुली निलो तपाईंको रंग हो। हामी भन्न सक्दैनौं कि यो एक प्रवृत्ति रंग जस्तै हो धेरै पेरी, प्यान्टोनको कलर अफ द इयर २०२२, व्यक्तित्वले भरिएको ठाउँहरू प्राप्त गर्नको लागि खराब सधैं राम्रो विकल्प हो।
के तपाईंको बैठक कोठालाई स्पार्क चाहिन्छ? तपाईलाई थाहा छैन कसरी ठूलो लगानी बिना सेतो बेडरूममा क्यारेक्टर थप्ने? यदि तपाइँ केहि चमकदार संग हिम्मत गर्नुहुन्छ भने, बिजुली नीलो यो एक महान सहयोगी हुनेछ। यदि तपाइँ सबै चीजहरू तोड्न चाहनुहुन्छ भने वा सानो फर्नीचर वा कलाको वस्तुहरूमा यसलाई अधिक सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाइँ यस रंगमा पर्खाल वा ढोकाहरू रंग्न सक्नुहुन्छ। Bezzia मा हामी आज तपाइँ संग केहि विचार साझा गर्दछौं।
यो हाम्रो घर को सजावट मा एकीकृत गर्न गाह्रो रङ जस्तो लाग्न सक्छ, तर एकदम विपरीत; बिजुली नीलो यो एक धेरै बहुमुखी रंग हो र धेरै अन्य रंगहरूसँग पूर्ण रूपमा संयोजन गर्दछ। यो एक आकर्षक रंग हो, यो निर्विवाद छ, र त्यसैले यो जान्न महत्त्वपूर्ण छ कि हामी कति टाढा जोखिम लिन चाहन्छौं वा हामी कति साहसी छौं, किनकि समयसँगै यसले हामीलाई थकाउन सक्छ।
बैठक कोठा, भोजन कोठा र शयनकक्ष तिनीहरू कोठाहरू हुन् जसमा हामी यो निलोसँग बिना डर ​​खेल्न सक्छौं र हामीले यस लेखमा तिनीहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेका छौं। के तपाईंलाई यसलाई एक र अर्कोमा समावेश गर्न विचारहरू चाहिन्छ? आज तपाईंले छविहरूको हाम्रो चयनमा तपाईंले यो गर्न आवश्यक सबै प्रेरणा पाउनुहुनेछ।
1 भोजन कोठामा
निम्न तस्बिरहरू हेर्दा त्यहाँ कुनै शंका छैन: कुर्सीहरू तिनीहरू भोजन कक्षमा बिजुली निलो एकीकृत गर्न सबैभन्दा लोकप्रिय विकल्प बन्छन्। आफ्नो पुरानो कुर्सीहरूलाई बिजुलीको नीलोमा पेन्ट वा पुन: अपहोल्स्टर गर्नु राम्रो विचार होइन? त्यसैले तपाईंले तिनीहरूलाई दोस्रो जीवन दिन सक्नुहुन्छ र एकै समयमा तपाईंको भोजन कक्षमा आधुनिक र बोल्ड टच प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
के तपाइँ थप मौलिक विकल्पहरू खोज्दै हुनुहुन्छ? यस रंगमा टेबुलमा जोकरहरू चित्रण गर्ने शर्त वा हिम्मत गर्नुहोस् नीलो कपाट राख्नुहोस् तपाईंको काठको टेबलको छेउमा। र यदि तपाईं भान्साकोठा वा बैठक कोठा जस्ता ठूलो ठाउँ भित्र भोजन कक्षलाई प्रमुखता दिन चाहनुहुन्छ भने यस रंगमा पर्खाल रङ गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।
बैठक कोठा सामान्यतया घरको सबैभन्दा ठूलो कोठा हो, जसले तपाईंलाई साँच्चै उल्लेखनीय कुराको साथ हिम्मत गर्न अनुमति दिन्छ। किन छैन पर्खाल रंग वा बिजुली नीलो भित्र ढोकाहरू? यो स्तब्ध हुनेछ, यसमा कुनै शंका छैन। के हुन्छ यदि तपाईंले यो नीलो चित्रित भित्तामा टिभी क्याबिनेट छ्याप्नुहुन्छ? गाढा भुइँहरू र हल्का रङका पर्खालहरू र फर्निचरहरू भएको तस्विरमा जस्तै बैठक कोठामा यो एक शानदार विचार हो।
एक सोफा, एक आर्मचेयर वा एक pouf बैठक कोठामा यो आधुनिक र साहसी रंग एकीकृत गर्न अन्य विकल्पहरू छन्। र तपाईले यो कोठाको शैलीलाई ध्यान नदिई यो गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईले माथिको छविमा देख्न सक्नुहुन्छ। नतिजा साहसी छ तर यदि तपाइँ पूरकको रूपमा तटस्थ रङहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाइँ ठाउँलाई हल्का पार्नुहुनेछ।
कला र कपडा को काम तिनीहरू धेरै बोझ नभएको नीलो ब्रशस्ट्रोकहरू समावेश गर्ने अर्को तरिका हो। रातो रङको सोफामा कम्बल, कफी टेबलमा फूलदान वा भित्तामा ज्यामितीय प्रिन्ट तपाईंको लागि पर्याप्त हुन सक्छ।
एक इलेक्ट्रिक नीलो हेडबोर्ड सम्पूर्ण बेडरूम परिवर्तन गर्न सक्षम हुनेछ। आखिर, यो कोठाको मुख्य पर्खाल हो, जहाँ सबै आँखाहरू सामान्यतया निर्देशित हुन्छन्। के तपाईं थप जोखिम लिन चाहनुहुन्छ? पर्खाललाई नीलोमा रंग्नुहोस् वा छोप्नुहोस् र केही निरन्तरता सिर्जना गर्न ओछ्यानमा एउटै रङमा कुसन थप्नुहोस्।
तपाईं यो निलो ओछ्यान मार्फत पनि समावेश गर्न सक्नुहुन्छ, डुभेट कभर वा सेतो लुगा लगाएको तपाईंको ओछ्यानमा प्लेडको साथ। सेतो, निस्सन्देह, इलेक्ट्रिक नीलो संयोजन गर्ने रङ मध्ये एक हो, तर एक मात्र होइन; सबै मा साना nuances रातो, सुन्तला, तोरी वा हरियो, तिनीहरू यससँग पूर्ण रूपमा फिट हुनेछन्।
के तपाईलाई बिजुली निलो मन पर्छ? के तपाइँ यसलाई तपाइँको घरको सजावटमा एकीकृत गर्ने हिम्मत गर्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » सजावट » सजावट को चलन » इलेक्ट्रिक नीलो, तपाईंको घरको लागि आधुनिक र साहसी रङ
कसरी आफ्नो पार्टनरलाई दु:ख हटाउन मद्दत गर्ने
स्कर्ट र उच्च जुत्ता, जाडोमा एक उत्तम संयोजन